Munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane nhumbu. ? [+ Ane Simba! ]
Munamato kuMhandara Montserrat yevakadzi vane nhumbu inokudzwa neChechi yeKaturike yezvose nyika, Yakanga iri iyo chechi imwechete iyo munamato kuMhandara yeMontserrat wakagadzirirwa vakadzi vane nhumbu kubva seimwe yemamiririri e Mhandara Maria Anonyatsoziva kuti chii chinonzi kuroverera hupenyu mukati membereko uye anogona kubatsira muchivengo chose chiitwa.
Munamato chombo chine simba chatinogona kushandisa chero nguva yatinenge tichida zvisinei nemamiriro ezvinhu.
Mavara matsvene anovimbisa mashura makuru kune avo vanokumbira kupindira kwaMwari.
1 Munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri Ndiani Mhandara yeMontserrat?
1.1 Munamato kuMhandara yeMontserrat kune vakadzi vane pamuviri
2 Mhandara iyi ichandibatsira here?
Munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri Ndiani Mhandara yeMontserrat?
Ndakaziva sei The Moreneta, kubvira pakuonekwa kwayo pamusoro pegomo, harina kupera kupa mashura kune wese mutendi anoda rubatsiro rwako.
Pakanga pana 1881 apo Baba Leo XIII Ini ndinomuzivisa semumwe wevateveri veDhiocese yeguta reCatalonia uye kubvira ipapo zuva ravo rinopembererwa chero Kubvumbi 27.
Kana zviri zvechitarisiko chayo, shanduro mbiri dzinozivikanwa, zvisinei izvo zvinozivikanwa zvine chokwadi chizere ndechekuti ichi chifananidzo chinouya kubva kudenga nechinangwa chekuti rutendo rwedu rwusimbiswe zvakare tichiziva kuti zvishamiso zviripo uye zvine chiso cheMhandara imwechete Maria.
Zvino zvaunoziva Mhandara yeMontserrat patron yevakadzi vane nhumbu, ngatinyengetere.
Maria, amai vane rudo runako, musikana akanaka weNazareta, iwe wakazivisa ukuru hwaIshe uye, uchiti "hongu", wakazviita amai veMuponesi wedu naamai vedu: nhasi teerera minamato yandinoita kwauri: Mukati mangu hupenyu hutsva huri kukura: mudiki uyo anounza mufaro uye mufaro, kunetseka uye kutya, tariro, mufaro kumba kwangu.
Ive nehanya nayo uye uichengetedze apo ini ndichiitakura muchipfuva changu.
Uye kuti, munguva inonakidza yekuzvarwa, kana ndanzwa kurira kwavo kwekutanga uye nekuona maoko avo madiki, ndinogona kutenda Musiki nekushamisika kwechipo ichi chaanondipa.
Izvo, ndichitevera muenzaniso wako uye muenzaniso, ndinogona kuperekedza uye kuona mwanakomana wangu achikura.
Ndibatsirei uye mundikurudzire kuwana mandiri pekugara pekugara uye, panguva imwecheteyo, nzvimbo yekutanga yekutora nzira dzako.
Zvakare, amai vangu, tarisa kunyanya kune avo vakadzi vanotarisana nenguva ino vari voga, vasina rutsigiro kana vasina rudo.
Ngavanzwe rudo rwaBaba uye vaone kuti mwana wese anouya munyika chikomborero.
Vaitei vazive kuti sarudzo yemagamba yekugamuchira uye kurera mwana inozikanwa.
Yedu Mukadzi weiyo Inomirira Yekumira, vape rudo rwako uye ushingi.
Wakafarira here munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri?
Munguva idzodzo dzaanenge aine nhumbu kakawanda mita inozadzwa nepfungwa dzekushungurudzika kuti zvavanoita izvi zvinoshandura rugare y runyararo kuti iwe unofanirwa kuve nenguva yakaita seichi nei minamato ichigona kuve utiziro hwekuenda kana kusagadzikana kwasvika.
Namata kune Mhandara yevakadzi vane pamuviri izvozvi!
Mhandara iyi ichandibatsira here?
Chero paanokumbirwa kubatsirwa saamai vakanaka, anouya kuzodaira kwedu.
Ndokusaka iwe uchifanira kuve nekutenda kusingazungunuke nekutenda kuti isu tichawana rubatsiro rwako nguva dzese.
Izvo hazvina basa kana ndezvedu kana shamwari kana shamwari, minamato Iyo inogara iine simba kana ichiitwa nekutenda uye kubva kumweya.
Ndinovimba wakada munamato une simba kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri.
Munamato kuMhandara yeJuquila
Munamato weMhandara yeGuadalupe